Business & Economics » ဘဏ်နှင့်ယုံကြည်မှု Trust & Banking	19
Channel7မှာ လာနေတဲ့ မိသားစုပြိုင်ပွဲကလိုမျိုး ဘဏ် လို့ ပြောလိုက်ရင် ဘာကိုမြင်လဲလို့ မေးချင်မိတယ်။ ငွေကြေးကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆက်ဆံနေကြရတဲ့ ဘဏ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခြေခံအကျဆုံးအမြင်က ယုံကြည်စိတ်ချရမှုလို့ပဲ ထင်ပါတယ်။
၀င့်ပြုံးမြင့် says: ဘဏ်မှာ ငွေသွင်းငွေထုတ်တွေ မလုပ်ဖူးပေမယ့် ဗဟုသုတ ရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါသည် တီမမ။
မြစပဲရိုး says: စီဂျေ မမ ပါ ဟေ့။ :-)))
Ma Ma says: ဖြစ်လာတဲ့ ကိုယ့်ဖောက်သည်ရဲ့ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ဆိုတာထက် သူတို့ကို မယုံသင်္ကာနဲ့ပြောပါတယ်ဆိုပြီး ပြန်အပြစ်တင်နေတာ။
အဲဒါငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ ဘဏ်တစ်ခုရဲ့ လုပ်ရပ်လားးးးးးးးးး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: အစ်မဒုံရဲ့ ထိုင်ဝမ်သင်တန်းပို့ချမှုတွေလည်း မျှော်လင့်တာထက်ပိုပြီး အဆင်ပြေ အောင်မြင်နေတာ ၀မ်းသာဂုဏ်ယူစရာပါပဲ မလတ်ရေ။
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E) says: ဖောက်သယ်တွေရဲ့ ယုံကြည် ကျေနပ်မှုကိုမယူပဲ ဖောက်သယ်တွေပြေးအောင် ဘလူးမျက်နှာဖုံး စွတ်ပြနေမှတော့
ကျနော့ကိုအပ်ထား Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14459
kai says: ကမ္ဘာမှာတော်တော်ဖြစ်ဖူးကြမှာပါ..။
ယူအက်စ်မှာ.. ဒေါ်လာ၁ရာများ ကွာတယ်ပြောလို့ကတော့… သေနတ်နဲ့ထုတ်ပစ်ကုန်ကြမလားမသိ…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: ဒီမှာတော့ လေသေနတ်နဲ့ အပြန်အလှန်ပစ်ကြတာပဲ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 9265
ဦးကြောင်ကြီး says: ကြော်ကတော့ အေတီအမ်စက်ကို တင်းသယ်… စင့်ဟာခေးမျှော်သလို ပိုပေးမလား စောင့်ပေမဲ တသပ်နဲ့တဂို တခါမှ ပိုမြဖူးဘူး… မြေအိုးဘဏ်….
Thint Aye Yeik says: မနေ့ကတင်… သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ATM စက်ထဲမှာ ကတ် ထွက်မလာပဲ ကျန်နေခဲ့လို့တဲ့…
အများသိအောင် လုပ်ပေးပါ လို့တောင် လာပြောနေလို့… ။ ဖုန်းထပ် ဆက်ပါ…
ဘာ ဆက်ဖြစ်မယ်တော့ မသိသေး။ ဗမာပြည်က ဘဏ်တွေ စနစ်တကျ ဖွံ့ဖြိုးလာဖို့… မျှော်လင့်နေရတုန်းပဲ…။
Tawwin Pan says: ATM ထဲကဒ်ကျန်တာတော့ မဖြစ်ဖူးသေးဘူး။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ထုတ်တဲ့ငွေက ထွက်မလာဘဲ ကဒ်ထဲမှာ ဖြတ်သွားတာမျိုး ကြုံဖူးတယ်။ ငွေထွက်မလာလို့ အခြား ATM စက်မှာ သွားထည့်ပြီး ထုတ်တော့ ထုတ်လို့မရလို့ လက်ကျန်စစ်လိုက်တော့မှ ကိုယ့်ငွေ အဖြတ်ခံလိုက်ရမှန်းသိတယ်။ သောကြာနေ့ညနေပိုင်း ဆိုတော့ ဘဏ်ကိုလည်း ဖုန်းဆက်လို့မရတော့..တနင်္လာနေ့အထိစောင့်ပြီး ဖုန်းဆက်ရတယ်။ အဲဒီဘက်ကနေ ဘယ်မှာထုတ်တာလဲ။ ဘယ်အချိန်လဲမေး။ သူတို့ဘက်က ATM စက်ထဲက Cash Amount ပြန်စစ်လို့ ပိုရင် ပြန်ထည့်ပေးပါ့မယ်တဲ့။ ၃ရက်လောက်စောင့်မှ ငွေပြန်ရတော့တယ်။ (တကယ်လို့များ ATM စက်ထဲမှာ စာရင်းမပိုရင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ မသိ။) ဒါတောင် အရင်ဆုံး မူရင်းဘဏ်ရဲ့ ATM စက်မှာထုတ်မိလို့။ အခြားဘဏ်တွေရဲ့ စက်မှာ ဖြစ်တယ်ဆိုရင် ဒီထက်ကြာမယ်ထင်တယ်။
Ma Ma says: ပထမတော့ ပြောကြဆိုကြတာတွေကို အသံဖမ်းအုံးမလို့။
ပြေပြေလည်လည်ပြောတဲ့မန်နေဂျာကိုကျတော့လည်း အားနာတာနဲ့…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ခင်ဇော် says: ငွေ(စက္ကူ) များများကိုင်ရတဲ့၊ ငွေ ကိုင် များတဲ့ ဒုက္ခတွေပေါ့ ချစ်မ ရေ။
Ma Ma says: မျှော်လင့်တာတွေများလွန်းလို့ လုပ်ပေးမယ့်သူကို အားနာပြီး ဖြစ်လာမှသာလို့ပဲ……….
nature says: ငွေကို ရေရတာ အဆင်မပြေလို့ ဂရမ်ချိန်ခွင်နဲ့ အလေးချိန်စစ်ဖို့စဉ်းစားပြီး စမ်းကြည့်ဖူးတယ် ။ အဆင်မပြေဘူး။ မှိုတက်နေရင် အလေးချိန်တွေက တော်တော်ကွာတယ်။ အခုငွေလျော့တဲ့ပုံစံက အောက်ခြေဘဏ်ဝန်ထမ်းတွေကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ လုပ်စားနေပုံရတယ်။ ဒီလိုအရွက်လျှော့တယ်ဆိုဘယ်လိုနေရာဘယ်လိုအချိန်မှာ ဘယ်လိုနေရာမှာ လျှော့လဲဆိုတာ စဉ်းစားစရာပါ။ ငွေကိုရေတွက်လက်ခံတုန်းကတော့ အရွက်ပြည့်လက်ခံမှာပဲ။ လျော့အောင်ဆို တမင်သက်သက်ပြန်လျော့ရမယ်။ အောက်ခြေမှာ ဝေစားမျှစားလုပ်နေရင်တော့ ဖမ်းမိဖို့မလွယ်ဘူး။ ဘဏ်မှာဒီလိုဖြစ်ခဲ့ရင် တာန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ အနဲဆုံးတော့ ဖြစ်ပျက်ပုံကို တိတိကျကျမှတ်တမ်းတင်ထားသင့်တယ်။
ဦးဦးပါလေရာ says: ကျုပ်သူငယ်ချင်း ဘဏ်တစ်ခုက ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်ရဲ့ တစ်ခါတုန်းက ပြောဖူးတဲ့စကားကို ပြန်သတိရမိတယ်..
Ma Ma says: အခုကိစ္စမှာ စိတ်ထဲမကျေလည်တာတွေ အများကြီး ကျန်သေးတယ်။
uncle gyi says: ဒီလိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းချက်သုံးဖြစ်လာကြပါမယ်
Swal Taw Ywet says: ကြာတော့ ကြာပါပြီ။
အောင် မိုးသူ says: အချို့ဘဏ်တွေဟာ ကာစတန်မာကြီးကြီးတွေကိုပဲ ချိုသာတယ်။